Namela Olom-pirenena Nifindra Toerana sy Fanànana Simba Ny Fihazàna an’i “El Chapo Guzmán ” Ilay Mpivarotra Zava-mahadomelina An-tsokosoko tany Meksika · Global Voices teny Malagasy
Namela Olom-pirenena Nifindra Toerana sy Fanànana Simba Ny Fihazàna an'i “El Chapo Guzmán ” Ilay Mpivarotra Zava-mahadomelina An-tsokosoko tany Meksika
Voadika ny 18 Novambra 2015 11:43 GMT
Araka ny Fanadihadiam-pirenena Momba ny Fivoaran'ny Isan'ny Mponina, voatery nitsoa-ponenana noho ny herisetra ny 6,4 isan-jaton'ny olona nifindra monina ao Meksika (olona manodidina ny 236.800). Dikasary avy amin'ny lahatsary momba ireo nafindra toerana navoakan'ny famoahambaovao ao an-toerana El Debate (Ny Adihevitra).
Mipoitra any amin'ny faritra an-tendrombohitra izay ihaonan'i Sinaloa, Durango, ary Chihuahua any amin'ny ilany avaratra atsinanan'i Meksika ny tatitra mikasika ny krizy mitatao amin'ny maha-olombelona. Mitranga izany taorian'ny hetsika ara-miaramila notarihan'ny tafika an-dranomasina Meksikana izay voalaza fa hitadiavana ilay lehilahy tena karohana indrindra ao amin'ny firenena, ilay mpivarotra zava-mahadomelina an-tsokosoko Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Fantatra amin'ny fomba tsy ofisialy amin'ny anarana hoe Telozoro Volamena ilay faritra noho ny varotra mavitrika zava-mahadomelina ao amin'ny tanànany izay saro-dàlana, miery ao anaty ravin-kazo ary miorina anelanelan'ny tendrombohitr'i Sierra Madre Andrefana. Nanomboka ny 14 Oktobra 2015 no nidiran'ny tafika an-tsehatra amin'ny fifandonana mahery vaika amin'ny vondrona iray mitam-piadiana izay lazaina fa miaro an'i Guzmán, afa-nandositra avy amin'ny fonja Highlands manana fiarovana ambony indrindra ao afovoan'ny firenena tamin'ny volana Jolay farany teo.
Nilaza ny mpanao gazety Raúl Rodríguez Cortés tao amin'ny tatitra ho an'ilay media mpamoaka vaovao ao an-toerana El Debate:
Herinandro lasa izay no nitrangan'ny hetsika tany Tamazula, Durango. Ny Vondron-tafiky ny Hetsika Manokana (Unopes) avy amin'ny Andian-tafika an-dranomasina faha-27 sy ny “Bataillon” Hery Manokana (FES) avy amin'ny Kaomandy Ankapobeny Faratampon'ny Tananan'i Mexico no nitarika izany hetsika izany.
Taorian'ny nipaingorany antso an-telefaonina, mailaka sy hafatra an-tsoratra milaza ny fivezivezena sy ny toerana hihaonan'ny mpitarika ny cartel ao Sinoloa no nanombohan'ny hetsiky ny tafika an-dranomasina, izay napetraka hivondrona tany amin'ny faritra an-tendrombohitra eo anelanelan'i Sinaloa sy Durango. Nino mihitsy aza izy ireo fa handeha hihaona amin'ny lefitrany ao amin'ny cartel, Ismael “El Mayo” Zambada i Guzmán Loera.
Nilaza ny media sasany (anisan'izany ny iray, voalaza etsy ambony), taorian'ny hetsika, fa naratra teo amin'ny tarehiny sy ny iray amin'ny tongony ilay olom-baventy amin'ny sehatry ny zava-mahadomelina. Mandritra izany fotoana izany, nisy sampan-draharaha sasany nitatitra ny fiantraikan'ny hetsiky ny tafika teo amin'ny mponina sivily, izay ankoatra ny miaina any amin'ny faritra lavitra, miatrika koa ny herisetran'ny tafika (avy amin'ny fanjakana) sy ireo vondron'ny jiolahy.
Ny Vokadratsin'ny Ady amin'ny Zava-mahadomelina eo amin'ny Olombelona
Namoaka tatitra fanombohana ny Noroeste (gazetim-paritra), fotoana fohy taorian'ny fifandonana, momba ny olona voatery nifindra monina ary nialokaloka tany Cosalá, iray amin'ireo kaominina 18 izay mandrafitra an'i Sinaloa:
Araka ny voalazan'ny ben'ny tanànan'i Cosalá, Samuel Valverde Lizárraga, nanao fanisàna ny manampahefana eo an-toerana—nampiasa ny angon-drakitry ny olona izay nitady fanampiana—manodidina ny 600 ny mpitsoa-ponenana taorian'ny naha voatery nifindra toerana ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, hatramin'ny nanombohan'ny fifindran'ny mponina avy any an-tendrombohitra tamin'ny herinandro lasa.
Nanampy ny tatitra taty aoriana:
Ny fikambanana toy ny “Article 19″ sy ny Kaomisiona Misahana ny Fiarovana ny Zon'olombelona ao Sinaloa dia mamaritra ny zava-misy ao Cosalá ho toy ny “krizy amin'ny maha-olombelona”, ary nilaza fa tokony ho jerena maika izany.
Mampiseho ny sasany amin'ireo olona voakasika taorian'ny hetsika ary manasongadina ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ny iray tamin'izy ireo ny lahatsary manaraka avy amin'ny El Debate:
Tsy noraharahin'izy ireo na nisy ankizy aza teo […] rehefa iny tsy nanantena firy [ny hipoiran’] ny angidimby iny izahay … ary nifampiteny izahay hoe mandalo fotsiny iny, toy ny mahazatra, raha [tampoka teo] niverina izy ka nanomboka nanao tifitra vary raraka.
Ny hetsiky ny fanjakana izay voalaza fa natao hisamborana indray an'i Guzmán, dia niseho tao amin'ny media andro vitsivitsy taorian'ny nizaran'ilay mpanao gazety Carlos Loret de Mola ny rakipeo sy ny lahatsary taloha sy taorian'ny fotoana nandosiran'ilay mpanjakan'ny zava-mahadomelina. Mampiseho ny mpiambina fonja mitady an'i Guzmán ivelan'ny efitry ny fonja nisy azy ilay fitaovana. Nanomboka nitady tao ambany fandrianan'ny miaramila izay natoriany izy ireo, minitra maro taorian'ny nahatsapàna fa tsy tao izy, izany rehetra izany tsy nampiharana ny fepetra tokony hatao rehefa fantatra fa misy fandosirana. Tao amin'ny lahatsoratra famoahankevitra, navoakan'ny El Universal, nilaza i León Krauze fa ny lahatsary no porofon'ny tsy firaharahiana miseho ary nampiany fa “Vazivazy ho an'izao tontolo izao i Meksika. Izany angamba io no henatra lehibe indrindra ho antsika tato anatin'ny 20 taona raha kely indrindra.”
Notaterin'ny media iraisam-pirenena vitsivitsy ihany koa, toy ny AFP sy MSN, ny voina nanjo ny mponina taorian'ireo fifandonana, izay namoaka tatitra mikasika ny zava-nitranga, ka nifantoka tamin'ny olom-pirenena manana trano sy fanànana nopotehina ary nodorana mihitsy aza. Ny fandrakofana iraisam-pirenena ihany koa dia miresaka ny fanjavonan'ny olona valo, fara fahakeliny, hatramin'ny voalohany nitifiran'ny herim-panjakana ny tranon'ny sivily.
Volana vitsivitsy lasa izay, namerina namoaka lahatsoratra iray ny blaogy Estado Mayor miaraka amin'ny dika an-tsoratry ny kabary nataon'ny manam-pahaizana manokana, Pérez Brenda, tao amin'ny vovonanan'ny olona voatery nifindra toerana, ka tao no nizaràny antontan'isa sasany izay mampiseho ny haben'ny olana ao amin'ny firenena:
Tadidiny fa ny Fanadihadiam-Pirenena Momba ny Fivoaran'ny Isan'ny Mponina dia mampiseho fa 6,4 isan-jaton'ny mpifindra monina ao amin'ny firenena no niova fonenana noho ny fandikan-dalàna. Sahabo ho olona 236.800 izany.
Arak'izany, nambaran'ny Fanadihadiam-Pirenena farany mikasika ny Niharam-boina nataon'ny INEGI fa 1,3 isan-jaton'ny vahoaka dia manambara fa voatery nifindra noho ny herisetra ny sasany amin'ny fianakaviany. Manodidina ny iray tapitrisa sy sasany ireo olona ireo.
Amin'ny dika hentitra, ny olona voatery nifindra ao anatiny izay nandao ny tranony noho ny ady sy fifandirana mitam-piadiana—dia manan-jo amin'ny fanampiana amin'ny maha-olona araka ny lalàna momba ny zon'olombelona, ​​hoy ny Komitin'ny Vokovoko Mena Iraisam-pirenena. Na izany aza, tsy midika izany fa nahazo fanampiana marina izay omen'ny fitsipiky ny zon'olombelona ho antoka ireo izay efa nafindra tany Meksika, araka ny fanamarihana mitombina nataon'ny Insight Crime tao amin'ny ampahan-dahatsoratra nosoratan'i Kyra Gurney.
Tsy an'ny faritra Telozoro Volamena irery ihany ny olan'ny fifindram-ponenana anatiny. Guerrero sy Michoacán ao Atsimo-Atsinanan'i Meksika dia firenena hafa ahitana olona voatery nandao ny tranony, namela “tanàna haolo” manontolo, vokatry ny adin'ny governemanta manohitra ny heloka bevava voarindra.
20 ora izayKiobà